रबि लामिछानेले रुदै News 24 छाडेपछि बोले ऋषी धमला ! टिभीले घात गर्यो, रबि देशकै हिरो हो भन्दै गरे तारिफ…..(भिडियो सहित) «
Published : 22 January, 2021 7:51 pm
उनले फेसबुकमा लेखेका छन,- “दुख लाग्यो…५ वर्ष काम गरेको संस्था छोड्नु पर्दा दुख लाग्यो। अन्तिम कार्यक्रम Live गर्न नपाउदा दुख लाग्यो, अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिम र मुख्य रिपोर्ट नै का,टिएकोमा झन दुख लाग्यो। हाम्रो टिमले तयार पारेको अन्तिम रिपोर्टमा के थियो त जुन प्रशारण गरिएन? त्यो सामग्री पोष्ट गर्दैछु।” त्यस्तै जाँदाजाँदै उनले सञ्चारमाध्यममा बोल्दै आफू देशको लागी प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको बताएका छन ।